Ny zava-misy any an-toerana izao dia ny mahakasika ny fifidianana. Tsy tonga akory ny fifidianana dia efa misy kandida miseho azy ho kandidam-panjakana ary manao fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana, hoy izy. Manampatra fahefana izy io ary hanananay porofo mihitsy izy milaza amin’ny vahoaka fa tsy maintsy ho lany. Manimba ny endriky ny fitondrana ny fahitanay izany fa aleo ny vahoaka no hifidy izay tokony hofidiany. Notorian’io kandida ao amin’ny distrikan’Antsalova io ho nandika lalàna koa ny lefitry ny lehiben’ny distrika ao an-toerana ary niakatra fampanoavana tao Maintirano mihitsy. Raha izao no mitohy dia hitsangana sy tsy hanaiky izahay ka manao antso avo ny fitondrana sy ny CENI handray andraikitra satria misy manararaotra ny any Ambanivohitra, hoy hatrany ny mponina any an-toerana.